मंसिर १ भाइटीका लगाउन अशुभ रहेको भन्दै बजारमा ठूलो हल्ला फिँजिएपछि बोल्यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, के हो मनासिब ? – Dainiksamchar
HomeNewsमंसिर १ भाइटीका लगाउन अशुभ रहेको भन्दै बजारमा ठूलो हल्ला फिँजिएपछि बोल्यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, के हो मनासिब ?
November 13, 2020 admin News 11641
मंसिर १ भाइटीका लगाउन अशुभ रहेको भन्ने ठूलो हल्ला फैलिएपछि पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति बोलेको छ । समितिले मंसिर १ भाइटीका लगाउन विभिन्न कारणले अशुभ रहेको भन्ने हल्ला गलत रहेको बताएको छ ।
शुक्रबार समितिका सचिव सूर्य ढुंगेलले विभिन्न कारणले अशुभ योग परेको भनेर फैलाइएको सूचनामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
अर्कोतर्फ शुभ योग नरहेको भनेर चलेको हल्लामा पनि सत्यता नरहेको ढुंगेलले बताए। मध्याह्नमा द्वितीया तिथी परेको दिन यमद्वितीया या भाइटीका मनाउने चलन छ । त्यसैले यसमा कुनै शुभ र अशुभ योगको कुरा नहुने ढुंगेलले बताए । त्यसैले भाइटीकाको दिन निर्धक्क भएर भाइटीका लगाउन पनि ढुंगेलले आग्रह गरेका छन् ।
September 29, 2020 admin News 1591
काठमाडौं– कोरोना भाइरसको संक्रमण काठमडौं उपत्यकामा बढ्दै गएसँगै सवारी साधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको छ । भदौ २५ बाट लागू भएको सवारी सञ्चालनमा जोविजोरको प्रणालीमा थप कडाइ गरिएको हो । सवारी जाम बढ्न थालेपछि जोर विजोर
October 8, 2020 admin News 351
नेपाल प्रहरीले अनुमति नलिएर प्रहरीको लोगो, पोसाक र दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गरिए कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न चलचित्र, टेलिचलचित्र, टिकटक, सर्ट फिल्म, प्रायंक, सांगितिक भिडियोलगायत
September 29, 2020 admin News 2162
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन । यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना बझाङमा घटेको छ । सम्झना विश्वकर्माको घटनामा जोडिएकाको आरोपमा पक्राउ परेका युवक यसअघि पनि त्यस्तै घटनामा संलग्न भएको खुलेको
LEX 18 agenda conversation: Job club (121771)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113673)
Hello world! (113346)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112104)